စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၆ ) ( ဆွေးနွေး မိတာလေးပါ – ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၆ ) ( ဆွေးနွေး မိတာလေးပါ – ၂ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၆ ) ( ဆွေးနွေး မိတာလေးပါ – ၂ )
Posted by Foreign Resident on Jul 29, 2012 in Think Different | 42 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၆ )
( ဆွေးနွေး မိတာလေးပါ – ၂ )
အခု Post ကတော့ အဘရဲ့
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၅ )
( ဆွေးနွေး မိတာလေးပါ ) Post ရဲ့
တွဲဖတ်မှ ပိုနားလည်ပါလိမ့်မယ် ။
အဘ အရင် Post ထဲမှာလည်း အဘ သဘောထားကို ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ် ။
၁ ။ ” မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက် အနေနှင့် ရခိုင်ဘက်ကနာတာပေါ့ကွာ ။
အထူးသဖြင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာ ရဲ့ သာသနာပြုနေတဲ့ ပုံစံ နှင့်
လူ့အခွင့်အရေး မရှိပုံ တွေကို ၊
တော်တော်လေးကို မကြိုက်တဲ့ အထဲမှာ ငါလဲ ထိပ်ဆုံးက ပါတာပေါ့ “
( မွတ်ဆလင် ညီအစ်ကိုများရေ Sorry ပါ ။
ဘာကြောင့် အဘ ဒီလိုခံစားရသလဲ ဆိုတာကို အဘ ရဲ့
” စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၀ ) ( ဘာကြောင့် မုန်းနေကြသလဲ ) ”
မှာ ဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ် )
( အဘ ရဲ့ ခံစားချက်ကိုသာ ဖေါ်ပြချင်းဖြစ်ပြီး ၊
ဆဲရေးမှု မပါတဲ့အတွက် ၊
ရေးမိတာကို ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ကွယ် )
၂ ။ ” အရေးကြီးရင် သွေးနီးတယ် ဆိုတဲ့သဘောအရတော့ ၊
ငါလည်း ရခိုင် သဟာရ အသင်းကို ၊
ရခိုင် ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ငါးသိန်း လှူထားပါတယ် “
” နောက်ဆုံး All out War ဖြစ်လာရင်တော့လည်း ၊
နောက်ဆုံး မြန်မာ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဖက်က
ဝင် ထောက်ခံပေးရတော့မှာပေါ့ “
၃ ။ Comment ထဲမှာလည်း ထပ်ရှင်းခဲ့ပါသေးတယ် ။
” အဘ က ကုလားကို မဆဲဖြစ်သေးတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ် ။
ကုလားကို ချစ်တဲ့ အဆင့် မ ဟုတ်ပါဘူး ။
ကုလားထက် စာရင် ရခိုင်ကို ပိုချစ်ပါတယ် “
” ရခိုင်တွေက အဲဒီ ဘင်္ဂါလီတွေကို ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ ” ကို
လာထောက်ပြ ကန့်ကွက်ရသလဲ ဆိုတာလေးကို ရှင်းပြချင်လို့ပါ ။
” အဘကရေးတဲ့ပိုစ့်တွေဖတ်ပီး အဘစိတ်ကို မခန့်မှန်းနိုင်တော့ဘူး “
ဆိုတဲ့ ဥဥ ကိုလည်း ရှင်းပြချင်လို့ပါ ။
ရွာသူားတို့ရေ ၊ ပြဿနာ တစ်ခုရဲ့ အဖြေမှန်ကို ရချင်တယ် ဆိုရင် ၊
ပုစ္ဆာ ရဲ့ ပေးထားချက် ကလည်းမှန်ရတယ်ကွယ့် ။
ပေးထားချက် ကိုယ်နှိုက်က မှားနေရင် ဘယ်လိုတွက်တွက် အဖြေမှန် မရနိုင်ပါဘူး ။
နောက်တစ်ခုက အဖြစ်မှန်ကို လက်မခံနိုင်သေးသမျှတော့ ၊
အဖြေမှန် ကိုရဖို့ လမ်းကလဲ ဝေးနေအုန်းမှာပါ ။
နောက်တစ်ချက်က ၊ ရွာသူား လူငယ်တစ်ချို့က ၊ လူငယ် သဘာဝ အလျှောက် ၊
ဒေါသ အလျှောက် ၊ ပြောပြစ်လိုက် ၊ လုပ်ပြစ်လိုက်ချင်တာ ၊
တစ်ဖက်ဖက်ကို ရပ်မိသွားရင်လည်း မျက်စိမှိတ်ပြီး ရပ်ချင်တာ ၊
အဲဒီ သဘာဝ တွေ ရှိနေတာ သင့်တော်သော်ငြားလည်း ။
အဘ တို့ လူကြီးတွေမှာတော့ ၊ အသက်အရွယ် ရာထူးအခြေအနေအရ ၊
တစ်ဖက်တည်း စကားကိုပဲ နားထောင်လို့ မရပါဘူး ။
သူ့ကိုတော့ မုန်းလို့ နာစေ ၊ သူ့ကိုတော့ ချစ်လို့ သာစေ လုပ်လို့မရပါဘူး ။
အခု လက်ရှိ အရေးအခင်းမှာ ဘင်္ဂါလီတွေဘက်က မစသင့်ပဲ စခဲ့လို့ ဖြစ်ခဲ့တာ ၊
( ဗလီက ထွက်ပြီး အစုအဝေးနှင့် မီး စတင်ရှို့တာကို ပြောတာပါ )
ဘင်္ဂါလီတွေကိုသာ အဓိက အပြစ်တင်ရမှာ ဆိုတာကို အဘ ယုံကြည်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ အဲဒီ အရေးအခင်း မတိုင်မှီ ၊ ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီပြီး ၊
လူမျိုးရေး တင်းမာမှု ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာတော့ ၊
ရခိုင်တွေဘက်ကလည်း ၊ အမှားအနည်းငယ် ရှိခဲ့တယ်လို့ အဘ ထင်ပါတယ် ။
အဲဒီတော့ ပုစ္ဆာ ရဲ့ အဖြေမှန်ကို ရချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ၊
အဲဒီ အချက်ကိုလည်း ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရမှာပဲကွယ် ။
အခု အဘ တို့ အမေစု နှင့် သမ္မတကြီး တို့ရဲ့ ဖြေရှင်းပုံကိုပဲ ကြည့်ပါ ။
လူငယ်တွေ ဘယ်လောက် သွေးဆူနေသည်ဖြစ်စေကာမူ ၊
သူတို့ကတော့ လုပ်သင့်တာကိုသာ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်သွားတာပဲ ။
အင်း ၊ နောက်ထပ် တင်ပြချင်တာလေး တစ်ခုကတော့ ၊
ဟိုဘက် Post မှာ ကို nigimi77 says: ပြောခဲ့တဲ့ ၊
” ဆိုင်ဘာ (Cyber) လေသေနတ်တွေ ခဏရပ်ပြီး “
ကိုယ်တွေ ( ဗမာ ၊ ရခိုင် ) ကသာ လေသေနတ် နှင့်ပြစ်နေတာ ၊
နိုင်ငံခြားက မွတ်ဆလင် အစွန်းရောက်တွေက
တကယ် ဒုက္ခပေးတော့မယ် ထင်ပါတယ် ။
ကိုယ်တွေ ( ဗမာ ၊ ရခိုင် ) အချင်းချင်း အပြစ်တင်တာတွေလျော့ပြီး
အမှန်တကယ်က ၊ အခု အမျိုး ဘာသာ ချစ်စိတ် ပြင်းထန်နေတဲ့ ရွာသူားတွေ နှင့် ၊
အဘ နှင့်က သည်းခံ စိတ် နဲတာ များတာ ၊
အသက်ကြီးတာ ငယ်တာ ၊ နဲနဲကွာတာကလွဲရင် ၊
ဘက် မကွဲဘူး ၊ တစ် ဘက်တည်း ( တစ် ဘက်တည်း ) ဆိုတာကို မမေ့စေချင်ပါဘူး ။
ဒီနေရာမှာလည်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်ဆလင် ထု ကြီးကိုလည်း တိုက်တွန်းလိုတာကတော့ ၊
ခံစားမှုတွေကို လျော့ပြီး ၊ ချုပ်ထိမ်းပြီး ၊
တာလီဘန် အစွန်းရောက်တွေ ထင်မြင်သလို မဟုတ်ပဲ ၊
မြန်မာ အစိုးရကလည်း ထိမ်းထိမ်း သိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက်နေတာ မှန်တဲ့ အကြောင်း ၊
ဘာသာရေး အရေးအခင်း ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပဲ ၊
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု နှင့် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ သာဖြစ်ကြောင်း ၊
ယခု အခါမှာ ပြေလည်မှုလမ်းစကို နှစ်ဖက်လုံးက
ကြိုးပမ်း လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း ၊
မြန်မာ နိုင်ငံသား ဘာသာကွဲတွေ အကြား
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆက်လက် နေထိုင်လိုကြောင်း ၊
စသဖြင့် ကြေငြာချက်တွေကို အမြန်ဆုံး ထုတ်စေချင်ပါတယ် ။
ဘယ်သူ မှန်တယ် ၊ ဘယ်သူ မှားတယ် ၊
ဘယ်သူ သာတယ် ၊ဘယ်သူ နာတယ် ၊ ကနောက်မှ ။
အစွန်းရောက်တွေ ဗုံးခွဲ သောင်းကျန်းပြီးမှ ဆိုရင်တော့ ၊
အရမ်း နောက်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အကျိုးဆက် အနေနှင့် ၊
နှစ်ဘက်စလုံး ( နှစ်ဘက်စလုံး ) ပက်ပက်စက် နစ်နာ ရတော့မှာ သေချာပါတယ် ။
နောက်မကျခင် အမြန်ဆုံး ကြေငြာချက် ထုတ်စေချင်ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ကြီး မလာမှီမှာ ၊
ထုတ်ပြန်ပေးပြီး မြန်မာပြည်သားထုကြီးရဲ့ မေတ္တာကို သိမ်းယူလိုက်စေချင်ပါတယ် ။
မေတ္တာ ဆိုတာ ၊ အသွားအပြန် ရှိပါတယ်လေ ။
အခွင့် အချိန်သာခိုက်မှာ စပြီး လက်ကမ်းကြည့်ပါလားဟင် ။
ဘာပဲပြောပြော ၊ အဘ ရဲ့ Post တွေမှာ ၊
ယဉ်ကျေးစွာပဲ Comment ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ၊
ရွာသူား အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဘယ်သူမှမလာသေးတော့ အရင်ဆုံး ၀န်မန့်ရတော့မယ်….
အခုအချိန်မှာ မြန်မာမွတ်ဆလင်အများစုကို အဲဒီကြေငြာချက်မျိုးထုတ်ခိုင်းလို့တော့
” အခုအချိန်မှာ မြန်မာမွတ်ဆလင်အများစုကို အဲဒီကြေငြာချက်မျိုးထုတ်ခိုင်းလို့တော့
အဲဒီလောက်တောင် အခြေအနေဆိုး တင်းမာနေပြီလား ဦးပါ ရေ ။
စိတ်ထဲ မကောင်းလိုက်တာ ။
ကျနော့်အထင် အခုအချိန်ဟာ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေအတွက် အခွင့်ကောင်းပဲ ။
သူတို့သာ အချိန်ကိုက် ကြေငြာချက် ထုတ်လိုက်နိုင်ရင် ၊
မြန်မာပြည်သားထုကြီးရဲ့ မေတ္တာကို ရနိုင်တယ် ။
အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေ ၊ နိုင်ငံရေး ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ကရော ၊
မြန်မာမွတ်ဆလင် ခေါင်းဆောင်တွေ နှင့် မညှိနှိုင်းကြတော့ဘူးလား ။
ဘာ မာန တွေ ခံနေကြသလဲ မသိပါဘူး ။
သဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေကတော့ လောလောဆယ်မှာ အနေရကြပ်လှပါတယ်။
သူတို့ စိတ်ထား သဘောထား ပြောင်းသွားမှာလဲ စိုးပါတယ်….
အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိတ်စက မွတ်ဆလင်လူမျိုးစုတွေထဲကသာ ဖြစ်လေ့ရှိတာမို့ အဲဒီအုပ်စုထဲမပါချင်တဲ့ မည်သည့်မူဆလင်မဆို ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုတဲ့ဆန္ဒကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထုတ်ပြသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေနေမှာ မြန်မာမူဆလင်အများစုက အကြမ်းဖက်မှုမကြိုက်ရင်သာရှိရင်မယ် ပူပေါင်းမှာတေ့ာမဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့မြင်မိတယ်။
အထက်ကပြောသလိုဘဲ ပြည်တွင်းက မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေဟာ
ကိုယ်နေတဲ့ နိုင်ငံနဲ့  ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံသားဆိုတဲ့  အသိမှတ်ပြုမှုအပေါ်မှာ
လေးစားမှုရှိကြောင်း သစ္စာစောင့် သိကြောင်းပြရပါတော့ မယ် ။မွတ်ဆလင်တွေအနေနဲ့ 
ကျဉ်းမြောင်းတဲ့  ဘာသာစွဲတွေ ၊ ဘာသာတူရိုင်းပင်းမှုတွေကိုမေ့ ထားပြီး ငါတို့ ဟာမြန်မာနိုင်ငံသား
ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘဲဖြစ်ရမယ် လို့ ခံယူချက်ထားပြီး ကမ္ဘာကသိအောင် ရပ်တည်မှုပြပါ။
မြန်မာလူမျိုးကိုမချစ်ရင်နေပါ ။ နေတဲ့ နိုင်ငံနဲ့  ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ကို အားနာပါ
တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်နှစ်ဘက်လုံးနာမယ် ။ ဗုံး လာခွဲမယ်ကြားလို့ ပျော်မနေနဲ့  ။ ဒီလောက်လူဦးရေပေါက်ကွဲနေတဲ့ 
ခေတ်မှာ မောင်ရင်တို့ ကို ဘယ်မွတ်ဆလင်နိုင်ငံမှ အစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်မခံဘူး ။
လက်တွဲနေထိုင်ချင်ရင် မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ကြောင်းပြဖို့အချိန်ကျပြီ ။
အဘရေ.. မူဆလင်ဘင်္ဂလီကုလားတွေဖက်က ဖွတာတော့ တော်တော်မြန်နေပီအဘ…
သင်္ဘောပေါ်မှာ မူဆလင်များတော့ အီဂျစ်ကကောင်တွေ ကိုရင်ကိုတောင် လာမေးနေကြတယ်…
မင်းတို့ မြန်မာတွေ မူဆလင်တွေကို အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့….
ကိုရင့်မှာ ဖြစ်သမျှကို အစအဆုံး မနည်းရှင်းပြလိုက်ရတယ်… အင်တာနက်ခေတ်ကြီးဆိုတော့
သတင်းအရမ်းမြန်တယ်…။ တတ်နိုင်သမျှတော့ ပြည်ပက ကိုရင်တို့ ရွှေမြန်မာတွေ
ဒုတ်ခမရောက်စေချင်ဘူးရယ်…။ ပြည်တွင်းက လူနာတာက အစိုးရရှိသေးတယ်…
ဒီမှာ နာရင်တော့ ဦးပြောင်မကယ်နိုင် တောင်မင်း မြောက်မင်း မကယ်နိုင် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်…
တော်သေးတယ်.. တားတားတို့က IMO သင်္ဘောသီးလေးတွေဖြစ်နေလို့….
လိမ္မာပါးနပ်စွာသာ နေပေတော့ဟေ့ ။
ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖက်ကို.. ရောက်သွားရင်.. တိုင်းပြည်နာလိမ့်မယ်..
ဒီအတွက်.. ဘယ်သူတွေဘယ်လိုရေးထား..လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ.. သမိုင်းမှတ်တမ်းကျန်ရစ်မှာပါ..
ဒီကိစ္စမှာ ကျွန်တော့် သဘောထားကလဲ
သဂျီး နဲ့ ထပ်တူကြပါတယ်
မန်းတလေး ဂေဇက် ကြောင့်မို့ဆိုတာကိုတော့
လိမ်ညာ လုပ်ကြံ ပြောရာမှာအားသန်လှတဲ့ .. ရိုဟင်ဂျာ ဘင်ဂါလီတွေက လုပ်ကြံသတင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး
မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေက အနိုင်ကျင့်စော်ကားပြီး နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်နေသ
ယောင် ၀ါဒဖြန်မှုတွေအကြီးအကျယ် လုပ်နေတဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ.. ကျနော်တို့ဟာ ဘာမှမပြောရဲပဲ အသံတိတ်
နှုတ်ပိတ် နေသင့်တယ်လို့ သူကြီးယူဆပါသလား။
ဘင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာပြသနာကို ကနဦးအစကတည်းက တိုင်းတပါးသားများ၏ နယ်မြေချဲ့ထွင်ကျူးကျော်
မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြသာနာတရပ်အနေနဲ့သာကျနော် ရှု့မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ခက်တာက ဘာသာရေးအစွဲကြီးသူ အချို့က
ဘာသာတူမှုကိုအကြောင်းပြုပြီး ဘင်ဂါလီတွေဖက်ကနေ မခံမရပ်နိုင်နာနေကြတာဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။
မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား တွေအနေနဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာအပေါ်အမြင်မကြည်
လင်မှုအချို့ရှိနေပေမယ့် ဗုဒ္ခ္မဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ဘာသာခြားတွေကို ဘာသာရေးအရ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်
လိုစိတ်မရှိကြပါဘူး..ဒါကြောင့် ဘာသာရေးအရဗုဒ္ဒ္ခဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကို
စတင်ပြုလုပ်ကြမှာ မဟုတ်ဖူးဆိုတာကို ကျနော်ယုံကြည်ထားပါတယ်။
ဘင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာ ပြသာနာ ဟာ မြန်မာပြည်သားတွေအနေနဲ့ မလွဲမရှောင်သာဖြေရှင်းရမယ့်
အရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လို့ တိုင်းတပါးသားတို့ရဲ့ကျူးကျော်လာနေမှု ပြသာနာအဖြစ်သာ အမှန်အတိုင်း လက်ခံဆွေး
နွေး သင့်ပါတယ်..မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လည်း ထစ်ခနဲ့ရှိ ဘာသာရေးအင်အားကိုအသုံးချတာမျိုးတွေ
သူကြီး ပြောတာမျှတ မှန်ကန်ပါတယ်…agree.
အဘရေ သတိထားမိတာတော့ အဘ ရခိုင်အတွက် ၅ သိန်း လှူတာကို ကြော်ငြာတာ ၂ ခါ ရှိပြီ။ မှတ်မိပါတယ်အဘရယ်
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၅ ) ဖတ်ပီး မှ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၆) ဖတ်တာပါ။
အိမ်မီးရှို့ လူသတ်လုပ်နေတာကျတော့ အသံတိတ်ကြိတ်ဝမ်းသာနေကြတယ်ထင်ပါရဲ့
ခုဆို…အာရပ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အစွန်းရောက် အာကိုင်ဒါ လိုအဖွဲ့မျိုးကတောင်
ဘဖေါ့ရေ… ပြည်တွင်းထဲက မွတ်ဆလင်တွေတယောက်မှတောင် အကောင်းနေလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး
ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ ဘာသာရေးမဟုတ်ဘဲ လူမျိုးရေးသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကမ္ဘာကသိအောင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ဘို့အချိန်ကောင်းဘဲမဟုတ်ပါလား?…….
အိမ်မီးရှို့ လူသတ်လုပ်နေတာကျတော့ ”
ကိုရင်မောင် ရဲ့ ။
အဲလိုပြောလို့ မရဘူးလေ ။
အဲဒါက ကျနော်တို့ ဂျာနယ်တွေ ဖေါ်ပြတဲ့ ကျနော်တို့ဘက်က အမြင်လေ ။
သူတို့ဖက်က အမြင်ကိုကျတော့ အောက်ဖက်က ၊
ခေတ်မောင်းဂျာနယ် ဆောင်းပါးမှာ တွေ့ရတယ်ဗျ ။
အဲဒါကြောင့် အဘ Post ထဲမှာ ၊
မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်ဆလင် ထု ကြီးကို တိုက်တွန်းတော့တောင် ၊
” ဘယ်သူ မှန်တယ် ၊ ဘယ်သူ မှားတယ် ၊
ဘယ်သူ သာတယ် ၊ဘယ်သူ နာတယ် ၊ ကနောက်မှ ” ဆိုပြီး
တမင်ကို ထည့်ရေးထားတာပါ ။
အခွင့် အချိန်သာခိုက်မှာ စပြီး လက်ကမ်းကြည့်ပါလားဟင်
အဘ ရဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာကို အပြည့်အဝ နားလည်ပါတယ်… လက်ရှိနေထိုင်ကြတဲ့
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြောင်း ပြသကြရမဲ့ အချိန်ကောင်းပါ …
မြန်မာပြည်ကြီးကို ချစ်ကြောင်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြေငြာစာလေး
ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးပါ အဘရေ …
ဒီလို ဖြစ်လာမှလဲ ခု လှုပ်နေတဲ့ ဂယက်တွေ ငြိမ်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်ဗျာ …။
မွတ်စလင်တွေစိတ်ရင်းမှန်တယ်ဆိုရင် သူတို့က နိုင်ငံတကာကို ဖြေရှင်းချက်ပေးကြတော့လေ သူတို့ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုက ……….
မွတ်စလင်ဂိုဏ်းချုပ် များ ငြိမ်သက်နေပါ၏ —
ရတက်မအေး ဖြစ်ရပါ၏ —
နိုင်ငံတကာသို့ ဖြေရှင်းချက်ပေးရန် အလားအလာမရှိဟု ထင်မိပါ၏ —
ကြုံကြိုက်လို့ ခေတ်မောင်းစာစောင်၊ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၃) က ၊
ဆောင်းပါးလေး ဖတ်စေချင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ကိုယ်တွေဖက်က အချက်အလက်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မသုံးသပ်နိုင်ပဲ ၊
အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ လေသေနတ် နှင့် ၊
သတ် မဟ ၊ –ိုး မဟ ဆိုပြီး ဆဲရုံပဲဆဲတတ်ပြီး ၊
နိုင်ငံတကာရဲ့ အထင်အမြင်သေးမှုကိုပဲ အားရပါးရ ရယူနေတဲ့ အချိန်မှာ ၊
ဘင်္ဂါလီများက နိုင်ငံတကာရဲ့ ဂရုဏာသက်မှုကို ၊
ဘယ်လို ဆွဲဆောင်ယူသွားလဲဆိုတာလေးကို သိရအောင်ပါ ။
” အင်္ဂလိပ်အစိုးရထဲ မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေကို ဒီဟောပြောပွဲမှာ တွေ့လိုက်ရလို့
သူပြောတွေဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ကြီးကြီးမားမား ရှိနိုင်တာကို မှန်းလို့ရပါတယ် ”
” ရိုဟင်ဂျာ အရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တခေါက် ”
ခေတ်မောင်း ၊ လန်ဒန်သတင်းထောက် ။
ဇူလိုင်လ (၁၆) ရက်နေ့က လန်ဒန် ဘောဂဗေဒ နဲ့ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံကျောင်း
LSE Arts and the Centre for the Study of Human Rights က ဦးစီးလုပ်တဲ့
“မြန်မာပြည်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာများ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ခေတ်မောင်း သတင်းထောက် သွားခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲကို လူ (၂၀၀) လောက် တက်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေ၊ မူဆလင်တွေ၊ ဗြိတိသျှအစိုးရထဲက မြန်မာပြည်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ကိုင်တဲ့
ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့က လူအနည်းငယ် နဲ့ ဗမာ ၃၊ ၄ ယောက်လောက် တွေ့ပါတယ်။
အင်တာနက် စာမျက်နှာ တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာ အကြောင်းကို အခြေအတင် ဆွေးနွေးနေကြတာမို့
ဗမာ အများစု တက်မယ်ထင်တာ နည်းနည်းလေးပဲ တွေ့လို့ အံ့အားသင့်ရပါတယ်။
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ (၂) ယောက်က အမေရိကန်လူမျိုး ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက်
Greg Constatine ဆိုတဲ့ အမျိုးသားနဲ့
Arakan Project က ဒါရိုက်တာ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေ အကြောင်း
စစ်တမ်းတွေ ကောက်၊ စာတမ်းတွေရေးတဲ့ Chris Lewa ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးပါ။
ဥပဒေနဲ့ တရားစီရင်ရေး ဆိုင်ရာတွေကို ဆွေးနွေးမယ့် အမျိုးသမီးက ပွဲကို ရောက်မလာခဲ့ဘူး။
ဂရက် (Greg Constatine) ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက သွားစရမရှိတဲ့ လူများ (Nowhere People)
ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက် စာတွေရေးလုပ်နေတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တေင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်းကို (၈) ခေါက်သွားပြီး အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အကြောင်း
မှတ်တမ်းတင်ပြီး ပြေးစရာပြည်မရှိတဲ့ မြန်မာပြည် က ရိုဟင်ဂျာများ
(Exile to nowhere: Burma’s Rohingya)
ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုလည်း ဒီလမှာပဲ ထုတ်ထားတယ်။
သူက ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်ရပ်ကို ကာလကြာရှည်စွာ တိုင်းပြည်မဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်
(Protracted Statelessness) ဆိုပြီး ရှင်းပြတယ်။ သူတွေ့ခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည်ထဲက
ဖာတီမာ နဲ့ ဂျာဖာ ဆိုတဲ့ လူနှစ်ယောက် အကြောင်းကို ပြောပြတယ်။
ဖာတီမာ ဟာ အသက် (၂၉) နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီး။
သူဟာ တခြား ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသား တယောက် နဲ့ ချစ်ကြိုက်လို့ လက်ထပ်ခွင့် တောင်းတာ
ကျေးရွာ အာဏာပိုင်တွေက ခွင့်မပြုလို့ နှစ်ဦးသား အစ္စလာမ် ထုံးစံ နဲ့ အညီ
တိတ်တိတ် လက်ထပ်ပြီး ပေါင်းသင်း နေထိုင်ကြတယ်။
ဖာတီမာ ကိုယ်ဝန်ရှိတော့ ရွာက အာဏာ ပိုင်တွေ သိသွားပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ ခိုင်းတယ်။
ရှိသမျှ ပစ္စည်း ဥစ္စာတွေ အားလုံးပေးပြီး တောင်းပန်တာလည်း မရလို့
နောက်ဆုံး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထဲကို ထွက်ပြေးလာကြရတယ်။
ဂျာဖာ ကတော့ နဂါးမင်း စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထဲကို
ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသား။
သူက မြန်မာပြည်ထဲကို ပြန်နေချင်တဲ့လူ။ သူတို့မှာ သွားစရာ၊ နေစရာ၊
သူတို့ကို လက်ခံမယ့်နေရာ တနေရာမှ မရှိဘူးတဲ့။
သူတို့လိုချင်နေတာက အင်္ဂလိပ်လို “ability to feel they belong” ဗမာလို ဆိုရင်တော့
“သူတို့နဲ့ဆိုင်ပါ့လားဆိုတဲ့ အသိပေးနိုင်မယ့် နေရာတခု” ပါတဲ့။
နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် ရုပ်သိမ်းခံရတာဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နဲ့
သူများက ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားမှု ဖျက်ဆီးခံရတာ
(to be stripped of citizenship is to be stripped of worthiness) ဆိုတာကို ရှင်းပြပါတယ်။
ခရစ်လယ်ဝါ (Chris Lewa) ကတော့ ဘူးသီးတောင် မောင်းတော မှာ သုတေသန လုပ်နေတဲ့
သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေ ရှိတော့ ရိုဟင်ဂျာ အကြောင်းကို တော်တော်လေး ထဲထဲဝင်ဝင် သိပါတယ်။
သူက ဇွန်လမှာ ဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခ ရဲ့ အကြောင်းရင်းခံက သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပထမ အကြောင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ်ထားတဲ့ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီတွေ၊
ဒုတိယက နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ငြင်းပယ်ခြင်း နဲ့
တတိယက ရန်လိုမှု နဲ့ အမုန်းတရားတွေကို အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းတဲ့။
သူက တတိယအချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းလာတာနဲ့ ဆက်စပ်ပြပါတယ်။
ပြောချင်တာ ရေးချင်တာ ပြောလို့ ရေးလို့ ရပြီ။
Freedom of Expression ရှိလာပြီ ဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ်ထားတဲ့ အမုန်းတရားတွေကို
လူကြားထဲ ပွင့်အန်ပြတဲ့ အကြောင်း ပြောပါတယ်။
၂၀၁၂ ဖေဖေါ်ဝါရီ လောက်ကတည်းက အင်တာနက် ပေါ်မှာ
ရိုဟင်ဂျာ ဆန့်ကျင်ရေး ဆောင်းပါးတွေ ပျံ့နေတယ်လို့ သူက ထောက်ပြပါတယ်။
ခရစ်လယ်ဝါက ရိုဟင်ဂျာတွေ ရခိုင်တွေကို ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမှာ အကြမ်းဖက်တာ
ဇွန်လ (၈) ရက် နေ့ တရယ်ထဲလို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်တွေမှာ ဖြစ်တာကိုတော့ သူတို့ အဖွဲ့ စစ်တွေမှာ မရှိလို့ အတိအကျ မသိဘူးလို့ ဆိုတယ်။
ဘူးသီးတောင် မောင်းတော မှာ ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့က စပြီး
အစိုးရက ကျောထောက် နောက်ခံပေးထားတဲ့
အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရိုဟင်ဂျာတွေ ခံရကြောင်း သူကပြောပါတယ်။
မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ အမှု (၄၅) မှု စာရင်းကောက်ယူ ရရှိထားတယ်လို့ ပြောတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ (၅၇၇) ယောက်ကို ဖမ်းပြီး ဘူးသီးတောင် ထောင်ကို လွှဲလိုက်တယ်။
ဒီလူတွေကို မောင်းတော ရဲစခန်းမှာ စစ်နေတုန်း ယောင်္ကျား အင်္ဂါ တွေကို မီး နဲ့ ရှို့၊
စအို ထဲကို ဒုတ်တွေ ထည့်တာတွေ လုပ်တယ်လို့
အဖွဲ့သားတွေက သက်သေယူထားတယ်လို့ ဆိုတယ်။
သူထပ်တလဲလဲ သုံးသွားတဲ့ စကားကတော့ “State-Sponsored Violence” ဆိုတာ ပါပဲ။
သူတို့ (၂) ယောက် တယောက်ကို (၁၅) မိနစ် လောက်စီ ပြောကြပြီးတော့
ပရိသတ် (၁၀) ယောက်လောက်ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေပါတယ်။
မူဆလင်တယောက်က ထပြီး ဒီကိစ္စတွေ ကြီးကျယ်လာရင်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဘာမှ မလုပ်ရင်
သူတို့ (၂) ယောက်ကို ရဝမ်ဒါတုန်းကလို စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတွေလို ခုံရုံးတင်သင့်တယ်။
ဒီကိစ္စဟာ ပြောင်းလဲရေး အပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်မလဲ ဆိုတာ ထမေးတယ်။
သူ့ကြည့်ရတာ တော်တော် စိတ်ဆိုးနေပုံရတယ်။
ခရစ်လယ်ဝါက ပြောင်းလဲရေးလို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ စီးပွားရေး အတွက်ပဲ မဟုတ်ဘဲ
လူ့အခွင့်အရေး အတွက် ပြောင်းလဲဖို့လည်း လိုတာကို ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စက မီးမောင်းထိုးပြတယ်လို့ ပြန်ဖြေတယ်။
အင်္ဂလိပ် အမျိုးသားတယောက်က ရိုဟင်ဂျာတွေ နောက်မှာ
အကြမ်းဖက်သမားတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလားလို့ မေးတယ်။
ခရစ်လယ်ဝါက သူရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်လာတာ (၁၂) နှစ်ရှိပြီ။
အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ဆိုလို့ တဖွဲ့မှ မတွေ့ဖူးဘူး။
ဒါပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာကို အကြောင်းပြုပြီး အခုဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို အသုံးချပြီး
အပြင်က အကြမ်းဖက်ချင်တဲ့ အဖွဲ့တွေ ရှိတယ်။
အခြေအနေက စိုးရိမ်ရတယ်လို့ ဖြေတယ်။
တယောက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သူ့ရပ်တည်ချက် မပျောက်အောင်
ဒီကိစ္စကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် သင့်သလဲ ဆိုတာ မေးတယ်။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ အစိုးရ ရာထူးရထားတဲ့ လူ မဟုတ်ပေမယ့်
မြန်မာပြည် တပြည်လုံးမှရှိတဲ့ အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူ့သဘောထားကို
တကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်လော့လာကြလို့
သူရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စမှာ သိသိသာသာ အသံတိတ်နေတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
လူတော်တော်များများက ဘာကြောင့်လဲ။ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။
ဘာလုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာကို သိချင်ကြတယ်။)
ခရစ်လယ်ဝါ ပြန်ဖြေတာကတော့ အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ ဟာ ပါလီမန်ထဲ ရောက်နေပြီ။
သူ့ရဲ့ အသံတိတ်မှု ( သူက Political Silence လို့ သုံးတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ မှားနိုင်တဲ့ အတွက်၊
လူကြိုက်နည်းနိုင်တဲ့ အတွက် တွက်ချက်ပြီး တိတ်နေတဲ့ အသံတိတ်မှုလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်)
အရမ်းကို စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေ တာဝန်ခံရမယ့် အချိန်ကို ရောက်လာပြီ။
အနည်းဆုံးတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နိုင်ငံမဲ့လူတွေပါဆိုတာကို
အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသင့်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ အချိန်ဟာ တိုလွန်းတဲ့အတွက် ဆွေးနွေးချင်တဲ့ လူအားလုံး ဆွေးနွေးခွင့်မရပါဘူး။
ခြုံပြီး ပြောရရင် ဒီပွဲဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာအစိုးရရဲ့
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေခံရတယ်ဆိုတာကို ထောက်ပြတဲ့ ပွဲပါ။
ခရစ်လယ်ဝါဟာ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ရင် leading expert ထိပ်တန်းကျွန်းကျင်သူလို့
တော်တော်များများက ယူဆထားတဲ့ အတွက် သူ့ကို မီဒီယာတွေမှာ ခဏ ခဏ တွေ့ရပါတယ်။
သူတို့ရေးတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို နိုင်ငံတကာအစိုးရ နဲ့ အဖွဲ့တွေက ဖတ်ပုံ ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရထဲ မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေကို ဒီဟောပြောပွဲမှာ တွေ့လိုက်ရလို့
သူပြောတွေဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ကြီးကြီးမားမား ရှိနိုင်တာကို မှန်းလို့ရပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ ပြည်တွင်းက ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့
ပြည်တွင်းရော ပြည်ပက ဗမာတွေ ဘယ်လိုတွေးလဲ။
နိုင်ငံတကာမှာ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
မြန်မာအစိုးရကို တစထက်တစ ပိုပိုပြီး အကူအညီပေးလာကြတဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းက
မြန်မာအစိုးရကို ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ ဘယ်လို ဖြေရှင်း စေချင်သလဲ။
မြန်မာအစိုးရကရော သူတို့ ဖြစ်စေချင်သလို ဖြေရှင်းနိုင်မလား။
မဖြေရှင်းဘဲထားရင် ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ။
ဒါတွေကဟာ ဒီဆွေးနွေးပွဲက ရတဲ့ အတွေးစတွေပါ။
အဘ အမြင်ကတော့ ၊
သတ် မဟ ၊ –ိုး မဟ ဆိုပြီး ဘင်္ဂါလီတွေကို ဆဲနေတာဟာ ၊
နိုင်ငံတကာရဲ့ အထင်အမြင်သေးမှုကိုပဲ အားရပါးရ ရယူနေတာဟာ ၊
ကိုယ့် လူမျိုး ( ရခိုင် ၊ မြန်မာ) ကိုယ့် ဘာသာ ( ဗုဒ္ဓဘာသာ ) ကို ၊
သက်သက် အောက်တန်းကျအောင် ၊ အရှက်ရအောင် ၊ ရှုံးနိမ့်အောင် လုပ်နေတာပါ ။
အဲလို ဆဲရေးနေတာထက်စာရင် ၊
ရခိုင်သဟာရအသင်းကို ငွေလေး တစ်ထောင် ၊
သွားလှူတာက ပိုလက်တွေ့ကျပါတယ် ။
တကယ့်ကို သတ္တိ ရှိလှပါပြီ ၊ မကျေနပ် လှပါဘူး ဆိုရင်တော့ ၊
ဟိုဖက် Post က ကို nigimi77 ဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆီကိုသာ သွားလိုက်ကြပါတော့ ။
တကယ်သွားရဲတဲ့လူတွေကိုတော့ ၊ မှန်တာ မှားတာ အပ ထား ၊
ကိုယ်ပြောသလို လုပ်ရဲတဲ့သူတွေ အဖြစ် ၊ အဘ လေးစားနေမှာပါ ။
ကို nigimi77 ဖိတ်ခေါ်နေတာ ဘယ်နေရာမှာမှန်း ရှာရခက်နေမှာစိုးလို့ ၊
အဘ Link Address လေးပါ ရေးပေးလိုက်ပါတယ် ။
” ကုလားကို အဖေခေါ်ချင်နေသူသို့(၂) ”
For some reason, can’t even put comment on that post. I have tried twice but my comment, for some reason, not shown by MG.
I have no idea, Shwe Phyu, Sorry.
” Dear Three Colors,
Ko Kai is linked in this Mandalay Tube
I can see the logo of that webpage is in Arabic (Similar to Al jazeera logo).
As far as he’s considerate of right & wrong things and
helping Myanmar the way he can, we have to welcome. ”
Shwe Phyu ရေ ။
Shwe Phyu မန့်ထားတဲ့ Comment အထဲမှာ
Web site Address ပါပါနေလို့ ၊
Shwe Phyu ရဲ့ Comment က ၊
အလိုအလျှောက် Spam ထဲရောက်သွားတာကွဲ့ ။
Admin က ဖယ်ပစ်တာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ။
ကြုံလို့ ရှင်းပြရရင် ၊ အဲဒီ သူဂျီး ရဲ့ Logo ကလေ ၊
Al jazeera သတင်းဋ္ဌာန ရဲ့ Logo နှင့် တူနေပေမယ့် ၊
တကယ့် တကယ် က Shwe Phyu ထင်သလို ၊
Arabic ဘာသာနှင့် ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူးကွယ် ။
မန္တလေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ၊
ပန်းချီ စာလုံးနှင့် ရေးထားတာပါကွယ် ။
သူဂျီးရေ လာရှင်းပါအုံးဗျ ။
ဒီမှာ တစ်မျိုးတွေ ထင်ကုန်ပြီ ။
ဒုတ်ခွ ၊ ဒုတ်ခွ ။
စာက.. မြန်မာလို.. မန္တလေး..တဲ့..။ ဘောင်ကတော့. .Tube ကို..ကိုယ်စားပြုပါတယ်..။
Dear Aba & Ko Kai,
Thanks for the explanation. The idea of that logo is really cool. I had to look at3times to get Mandalay in Myanmar.. Really cool.
Before you put this comment, you should ask Chris Lewa how much they got paid for that from Terrorist kalars. ခရစ်လယ်ဝါ (Chris Lewa) ကတော့ ဘူးသီးတောင် မောင်းတော မှာ သုတေသန လုပ်နေတဲ့
Ask them if there is any Rakhine people in the research or did they ever get the story from Rakhine people side…
အဲဒါတွေက အဘ သဘောထား မဟုတ်ဘူးလေ ။
ကိုယ်တွေဖက်က ဆဲရုံပဲဆဲ နေတဲ့ အခြေအနေမှာ ၊
ဘယ်လို ဆွဲဆောင်ယူသွားလဲဆိုတာလေးကို သိရအောင် တင်ပြတာပါ ။
အင်း ၊ ငွေ အားနည်းလို့ ဖြစ်ရတာလို့ထင်ရင်တော့လည်း ၊
ငွေ စုပြီး တန်ပြန် ကြရတော့မှာပေါ့လေ ။
ဒီအတိုင်းကြီးကတော့ ၊ ဆဲရင်း ဆဲရင်း နှင့်ပဲ မြောင်းထဲ နစ်သွားမှာလေ ။
မှန်တာပြောရရင် ကိုယ်တွေဖက်က ၊
နိုင်ငံတကာရဲ့ ဂရုဏာသက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ နေနေသာသာ ၊
နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ ကိုယ့် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကိုတောင် ၊
ဟုတ်တိပတ်တိ မရဘူးထင်တယ် ။
လာတက်တဲ့ ဗမာက ၃ ၊ ၄ ယောက်လောက်ပဲ တွေ့ရတယ်တဲ့ ။
ကိုအဘဖော Post နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့ အသိ တစ်ခု အတွက် ဝင်ပြီး သတိပေးချင်ပါတယ်။
အဲဒါက ကျေးဇူးတရား ကို သိတတ်ခြင်းပါ။
ထမင်းတစ်လုပ်စားရရုံ၊ ရေတစ်မှုတ်သောက်ရရုံ၊ အရိပ်တစ်ချက်ခိုခွင့် ရရုံ တောင်မှ သူတထူး ရဲ့ ကျေးဇူး ဆိုတာ ကို သိတတ်ရပါတယ်၊
ဒါဟာ ဘယ်ဘာသာ ကိုးကွယ်၊ ကိုးကွယ် ဒီ အသိ ကတော့ ရှိရပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်ကိုယ် နေထိုင်ခွင့် ရအောင် ပိုး ပေးထား တဲ့ မြေ ဆိုတာကို လဲ ကျေးဇူးသိရပါမယ်။
အဲဒီ မြေမှာ သွေးမစွန်းရအောင်၊ အဲဒီမြေမှာ အမုန်းတရား တွေ နဲ့ လွှမ်းမနေအောင်၊ အဲဒီ မြေ ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမနွမ်းအောင် အဲဒီ မြေမှာ နေသူတိုင်း အသိတရား ထားပြီး နေသင့်ပါတယ်။
မဟုတ်တင် တော့ အဲဒီ မြေ ကို စော်ကားနေတာပါဘဲ။
ဒီလို မှ ကျေးဇူး မသိတတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူ အဖြစ် ရှိနေသေး လား လို့ သာ စမ်းစစ်ကြည့်ကြ ပါတော့။
ဒီ ရွာထဲ မှာတောင် စိတ်မကောင်း စရာ တွေ့နေရတာ က
ကိုယ့်အတွက် ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟ ခွင့် ပေးထားတဲ့နေရာ၊
ကိုယ့် နဲ့ သူ ရဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေ မျှဝေ လို့ ရတဲ့ နေရာ
ကိုယ့်မှာ စကားပြောစရာ အပေါင်းအသင်း တွေ ရခွင့် ရှိတဲ့ နေရာ မှာတောင်
ကိုယ့် အမုန်းတရား တွေကို လာ ထွေးထုတ်ပြီး လှပ အေးချမ်း တဲ့ နေရာ ကို အလှပျက်အောင် လုပ်နေကြ တာ တွေ့ရပါတယ်။
တစ်ခြားသူ ကို အသာထား ဒီ နေရာ ကို ဖွင့်ပေး ထား တဲ့ သူကြီး ကို လဲ ရစရာ မရှိ အောင် စွပ်စွဲ ပြီး ကျေးဇူး ကန်းတတ် ပါသေးတယ်။
သူ့ ဖွင့်ထားပေးတဲ့ နေရာ မို့ သူဘာပြောပြော ခေါင်းညိမ့် ထောက်ခံ နေစရာ မလို ပေမဲ့ ဂါရဝ တရားဆိုတာ ရှိ ကို ရှိရပါမယ်။
ဒါကြောင့် သူများ ကို အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုးလို့ မပြောခင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရော တစ်လုပ်စားဘူး သူ့ကျေးဇူး ဆိုတဲ့ စကား ကို လိုက်နာသူလား ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စမ်းစစ် ကြပါ။
အဘဖော ကို တော့ မြန်မာပြည်ထဲ က လူတွေ ကို မစဉ်းစားခိုင်းခင်မှာ လူအခွင့်အရေး ကို ရှေ့တန်းထားအော် နေတဲ့ နိုင်ငံကြီး တွေ မှာ တောင် မသိမသာ အသံဝင် နေ တဲ့ သတင်း တွေ နားထောင်ကြည့် စေလိုပါတယ်။
ဒီနေ့ ဘဲ ရေဒီယိုမှာ စပိန်က ကမ်းပိန်းတစ်ခု အကြောင်း အင်တာဗျူး လေး ကြား မိလို့ပါ။
သူများ တွေ လက်ရှောင်ချင် နေတဲ့ အကြောင်း ကတော့ သေချာပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီ လို ဖြစ်နေတာ ကို ကာယကံရှင်များ လဲ မိမိတို့ အဖြစ်ကို ပြန်စစ်ဆေး ဖို့ လိုနေပါပြီ။
မဟုတ်ရင်တော့ နောက်ပိုင်း မျိုးဆက်များ အတွက် မကောင်းလှပါဘူး။
တကယ်တော့ အများစု က အဆိုးမဟုတ်နိုင်ပါ။
အပေါ်ပိုင်းကတော့ ကျနော်နှင့် သိပ်မဆိုင်လှပဲ ၊
အရီးလတ် ရင်ဖွင့်သွားတယ်ထင်ပါတယ် ။
” လူအခွင့်အရေး ကို ရှေ့တန်းထားအော် နေတဲ့ နိုင်ငံကြီး တွေ မှာ တောင်
မသိမသာ အသံဝင် နေ တဲ့ သတင်း တွေ နားထောင်ကြည့် စေလိုပါတယ်။
ဒီနေ့ ဘဲ ရေဒီယိုမှာ စပိန်က ကမ်းပိန်းတစ်ခု အကြောင်း အင်တာဗျူး လေး ကြား မိလို့ပါ ”
စပိန် ကမ်းပိန်း က Detail Link မဟုတ်တောင် ၊ Hint လေးပေးအုန်းလေ ။
ဘာတွေ ဖြစ်နေကြပြန်သတုံး ။
ကျနော်သိတာကတော့ စပိန် အပါအဝင်
ဥရောပ တစ်ခုလုံး နီးပါး ဒေဝါလီ ခံရတော့မယ် ဆိုတာပဲ ။
” သူများ တွေ လက်ရှောင်ချင် နေတဲ့ အကြောင်း ကတော့ သေချာပါတယ် ”
သူများ တွေ လက်ရှောင်ချင်နေတဲ့ အကြောင်းကို ၊
လက်မရှောင်တတ်တဲ့ အဘ ဖေါကိုမှ လာပြောတာလားဟင် ။
ဟင့် ၊ လူဂျိုး ။
ဟာာာာာာာ ။ တွေ့ပြီဗျို့ ။
Cordoba တဲ့ ။ Alongside ဆိုဘဲ ။ အဲဒါမျိုးကျတော့ ချစ်ချင်တယ်ပေါ့လေ ။
အင်းးးးးးးး ။ အဘ လည်း အဲဒီလောက်အထိတော့ မရေးရဲသေးပါဘူး ။
အထူးသဖြင့် ခု အချိန်မှာပေါ့ ။
သူကြီးခမျာမှာလည်း အပူတွေ ဝိုင်းနေရှာတာ ။
စကားမစပ်ပါ ၊ အရီးလတ်ရေ ။
အဘ အင်္ဂလန် ဗီဇာ ( UK Multi Entry /6months ) ရထားပြီ သိလား ။
ဟဲ ဟဲ ၊ ဒီရက်ပိုင်း ခေါင်းကို ဆင်နင်းတယ်ဆိုတဲ့ ၊
အိပ်မက်ဆိုးတွေများ မမက်ဘူးလား ။ ;P
ဟဲ ဟဲ ၊ အရဂါးနောက်ထာ ။
လန်ဒန်မှာ ဘယ်နေရာတွေ လည်သင့်တယ်ဆိုတာလေးတော့ ၊
ခေါင်း ဆင်နင်း တယ် လို့ အိပ်မက် လဲ အကြောင်း မဟုတ်ပါဘူးလေ။
အဲဒီ ဆင် က အပြင်မှာ တွေ့ရတာ မှ မဟုတ်တာ။
ပြသနာ မရှိလောက် ပါဘူး။ ;-)
ကိုအဘ လို ကက်ပတိန် ကြီး ကို မှ ယူကေ ထဲ ဝင်ခွင့် မပေး ရင် ဘယ်သူ့ ကို ဝင်ခွင့် ပေးပါတော့ မလဲ။
ကျွန်မ က လန်ဒန် မှာ နေတာ မဟုတ်ဘဲ ဘာမှ စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိတဲ့ တော မှာ နေတာမို့ လာလည်ပါလို့ လောကွတ် မလုပ်တော့ပါဘူး။
လန်ဒန် မှာ တော့ နေရာတိုင်း က တိုးရစ် တွေ အတွက်ချည်းပါဘဲ။
အောက်စဖို့ တို့၊ ကိမ်းဘရစ် တို့၊ စကော့တလန် ကို လဲ အချိန်ရရင် သွားသင့်တယ်။
နွေရာသီလိုမျိုးမဟုတ်တောင် မေလ ကနေ အောက်တိုဘာလ အတွင်းမှာ ဆို သွားလာ ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဆောင်းတွင်း ဆိုရင် တအားအေးတယ်၊ သွားလာလို့ မကောင်းဘူး။
ဒီနေရာမှာ ရွာသူားများကို အသိပေးလိုတာကတော့ ။
၁ ။ အခုရောက်နေပြီးသား ဘင်္ဂါလီ ၉ သိန်းကို ပြန်ပေးဖို့ ၊
လုံးဝ ( လုံးဝ ) မစဉ်းစားပါနှင့် ။ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။
အဘ သိသလောက်ကတော့ အစိုးရက ၊
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဖက်မှာ ကျန်နေသေးတဲ့ ၄ သိန်း ကိုပါ ၊
ထပ် လက်ခံရဖို့ ရှိပါတယ် ။
၂ ။ အဲဒီ စုစုပေါင်း ဘင်္ဂါလီ ၁ သန်း ၃ သိန်း ကိုလည်း ၊
ဘယ် နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်ကမှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၊ သူတို့ပြဿနာမှ မဟုတ်တာ ။
လူသားချင်း စာနာလို့ လက်ခံမယ် ဆိုရင်လည်း လွန်ရော ကျွံရော ၊
တနှစ်လုံးမှ တစ်ထောင်လောက်ပဲ လက်ခံမှာပေါ့ ။
၃ ။ အခု ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ၉ သိန်း ကို ရှင်းပြစ်မယ် လို့လည်း စိတ်ကူးမယဉ်ပါနှင့် ၊
အခု အရေးအခင်း လူ ၁၀၀ လောက် သေတာနှင့်တောင် ၊
ရခိုင်ပြည် စီးပွားရေး စ ထိခိုက်လာပါပြီ ၊ မွဲလာပါပြီ ။
နောက်တစ်ချက်က လူတွေ သောင်းချီပြီး သေလို့ကတော့ ၊
Muslim Brotherhoods တွေ ၊ တာလီဘန်တွေ ၊ Volunteers တွေ ၊
နိုင်ငံခြား စစ်တပ်တွေပါ ဝင်လာတော့မှာ သေချာပါတယ် ။
နိုင်တာ ရှုံးတာ အသာထား ၊ တတိုင်းပြည်လုံး မွဲပြာကျသွားမှာပါ ။
အထက်ပါ အချက် ၃ ချက်နှင့် မညိစွန်းတဲ့ အဖြေမျိုးကသာ ၊
လက်တွေ့ဆန်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။
အဘ အထင်ပါ မှားနိုင်ပါတယ် ။
ကျတော်စဉ်းစားမိတာတစ်ခုပါ.ကလေများဆန်နေမလားမသိဘူး။အမျိုးသားလုံခြုံေ၇းအတွက်လူ့ အခွင့်အ ရေး ချိုးဖောက်သင့်ရင်ချိုးဖောက်ရမှာပဲ.လူ့ အခွင့်ေ၇း ကိစ္စ တွေအမြဲအော်နေတဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတောင်အီရတ် ကိုဘာအကြောင်းပြချက် မရှိပဲဝင်ကစ်သေးတာပဲ.ဒါလဲ လူ့ အခွင့်အေ၇းချိုးဖောက်တာပဲမဟုတ်လား။အစ္စရေး ဂါဇာ ကိုပိတ်ထား တယ်ဘယ်ကောင်ဘာပြောရဲလို့ လဲ။တပြန်နှစ်က ထောက်ပံ့ေ၇းသင်္ဘောကိုတောင် ကိုင်လိုက်သေးတယ်.
ကျတော်တို့အစိုးရလဲ အဲဒီလိုလုပ်သင့်ရင်လုပ်ရပါမယ်. NGO UNHRC တစ်ကောင်မှပေးမ၀င်နဲ့.ဘ၈င်္လီကောင်တွေကို ဘူးသီးတောင် မောင်းတောက နေဘယ်မှပေးမထွက်နဲ့။ဒီကောင်တွေဘယ်နှနှစ်ခံနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပေါ့.အဲဒါမှအမေကမွေးအလ္လာကကျွေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်.ခုပုံစံကNGoတွေကကျွေးထားတော့မွေးမှာပေါ့.ရခိုင်ရွာတွေကို သူတို့နဲ့သပ်သပ်ခွဲထား။နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးကာ ကျော်ဝင်လာတာနဲ့ ဖမ်းမနေနဲ့.ပစ်သာပစ်.လူလူချင်းတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါရဲ့.ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတာကို စော်ကားလာရင်တော့ တခုခုတော့ တုန့် ပြန်ရမှာပဲ.အန်ကယ်ဆမ်တို့ ကိုသာပိုင်အောင်ကပ်ထား.အစ္စေ၇းဆီမှာဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာ လေ့လာထားသင့်တယ်.တခါတခါအားငယ်မိတယ်.ကိုယ်တွေလိုဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုလို့အေ၇းကြီးလို့ လောက်လောက်လားလားအားကိုးစရာမရှိဘူး.အဲဒီတော့ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ့်ဘာသာကို ပဲဖြေရှင်းရမယ်.ဘယ်ကောင်မှ အားကိုးစရာမလိုသလို ဘယ်သူ့ ကိုမှလဲဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးထင်တယ်။နောက်တစ်ခုက အစိုး၇ကပြန်လည်ထူထောင်ေ၇းအတွက်ဘာမှပြောသံမကြားသေးဘူး.အိန္ဒိယမှာတာ့ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်သွား ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ သန်း 50 ကျော်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ သတင်းမှာဖတ်လိုက်ရတယ်.
ကုလား များ ဖျက်ဆီး နေကြတဲ့ ဗီဒိုယို လင့် လေးပါ
မကြည့်ရသေးသောသူများ အတွက် ပါ
အဟိတ္တိရိစ္ဆာန်နဲ့ တူသောရိုဟင်ဂျာကို ဘာလူ့အခွင့်အရေးမှပေးစရာမလိုဘူး။လူ့အခွင့်အရေးအော်
တာလီဘန်မှ ခွဲထွက်လာသော အစ္စလာမ်အစွန်းရောက် အယ်ကိုင်းဒါးခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင်ကို သုတ်သင်ရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထားသည်ဟု နာမည်ကြီးသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျိုးရိုးမှလာသော အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘာမားသည် ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တို့ကို အသိမပေးပဲ ပါကစ္စတန်ပိုင်နက်တွင်း NAVY SEAL အထူးတပ်ဖွဲ့ကို လွှတ်ပြီး ၀င်သုတ်သင်စေသနည်း…..။
ဘင်လာဒင်သည် မိမိနိုင်ငံလုံခြုံရေးနှင့် မိမိနိုင်ငံမှ ပြည်သူလူထု၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို နာလံမထူအောင် ဖန်တီးခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် ထို့ပြင် ..မသေမချင်း ခြိမ်းခြောက်နေဦးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် သမ္မတနှစ်ဆက်ပြောင်းသည်အထိ ….ဆယ်နှစ်တိုင်တိုင် လုံးဝလက်မလျှော့ပဲ လိုက်လံရှာဖွေကာ…..နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် အင်အားသုံး လက်စတုံးသုတ်သင်ခြင်းဖြစ်သည်..။ ထိုသုတ်သင်သူအား အကာအကွယ်ပေးသူသည် သူ့ရန်သူဖြစ်သည်…။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာနေလိုသော နိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးသော မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက် အနေနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ သို့ အောက်ပါအတိုင်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လည်း လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ သဘောထားအမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူများ – အယူသီးသူများ – တယူသန်သူများ ထိပ်တိုက်တွေ့သောအခါ ပဋိပက္ခ အထိကရုန်းအသွင်ဆောင်သောပြသနာများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မှာ မငြင်းနိုင်သော ကိစ္စများဖြစ်ပါသည်။
မကြာခဏ ဖြစ်ပွားခဲ့သောပြသနာများကို နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ရှိသူများက မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းပေးသည်ဖြစ်စေ – မဖြေရှင်းပေးသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်း ဖြစ်သည့်နည်းနှင့် ပြေလည်အောင် တည်ငြိမ်မှုရှိအောင် ဖြေရှင်းခဲ့သည်သာဖြစ်ပေသည်။
နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူများ၏ လျှင်မြန် မှန်ကန်စွာဖြေရှင်းမှုမရှိခြင်း၊ ပြည်တွင်းမီဒီယာများ၏ မှားယွင်းသော သတင်းတင်ပြမှုများ – စိတ်ဆန္ဒစောတင်ပြမှုများအပေါ် အခြေခံကာ ပြည်တွင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် နယ်စပ်ပြသနာကို ပြည်တွင်းနေထိုင်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များထံသို့ပါ ကူးစက်ပြန့်ပွား လာစေရန်ကျိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုဆဲဆိုစော်ကားမှုများ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများ များစွာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသော ဗုဒ္မဘာသာဝင် သံဃာတော်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပူးပေါင်းကူညီမှုဖြင့် ပြသနာရပ်များပြန့်နှံ့မလာအောင် ကျွန်ုပ်တို့ တားဆီးထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ဖြေရှင်းရာတွင် နှစ်ရှည်လများဖြစ်ခဲ့သည့်ပြသနာဖြစ်ခြင်း – နယ်စပ်မှ တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုများ ရှိနေခြင်း – တဘက်နှင့်တဘက် မဖြစ်နိုင်သောတောင်းဆို အပြစ်တင်မှုများရှိနေခြင်း – များပြားလှစွာသော ပြသနာများ ဖြေရှင်းရန်ရှိနေခြင်း တို့ကြောင့် လည်းကောင်း ၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေအရလည်းကောင်း ထိုက်သင့်သည့် အချိန်ယူဖြေရှင်းရမည့် ကိစ္စဖြစ်နေပါသည်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရများအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် စစ်မှန်သော အကူအညီ ပေးအပ်လိုသည်ဆိုပါက – နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သော အစို့ရအဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး လိုအပ်သောရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း အကူအညီများ၊ ငွေရေးကြေးရေးအကူအညီများ၊ နည်းပညာအကူအညီများပေးရန်သာ အကြောင်းရှိပါသည်။
ယခုလုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံတကာရှိမြန်မာသံရုံးများရှေ့တွင် ဆန္ဒပြခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအား စော်ကားမော်ကားပြုမီးရှို့ပြခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီး၏ဓာတ်ပုံအား မဖွယ်မရာပြုလုပ်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားများအား တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများသည် မည်သည့် အကျိုးတရားကိုမှ ရရှိလာမည်မဟုတ်ဘဲ – ပြည်တွင်းမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် ပိုမို ခက်ခဲကျပ်တည်းသော အခြေအနေတရပ်သို့ တွန်းပို့ပေးသလိုသာဖြစ်မည်ကို သတိချပ်သင့်ပါသည်။
အီရန်နိုင်ငံအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စအပေါ် ကုလသမဂ္ဂတပ်များစေလွှတ်ရန် တိုက်တွန်းမည့်အစား အခြေအနေပိုမိုဆိုးယွားနေသော ဆီးရီးယားကိစ္စကို အာရုံစိုက်သင့်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့သည်လည်း အီရန်နိုင်ငံ၏နောက်မှ သံယောင်မလိုက်သင့်ပါ။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနေနှင့်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ်ရန်လိုသော သဘောထားများမထားသင့်ပါ။ တာလီဘန်အဖွဲ့အနေနှင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ – မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားများ၊ သံတမန်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို ခြိမ်းခြောက်မှုလုပ်ခွင့် မရှိပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ တာဝန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့မှလည်း အသက်ပေး ကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်။
အစ္စလာမ်သာသနာတော်၏ အဆုံးအမများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော – နိုင်ငံတကာမှလက်မခံနိုင်သော – ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား လူမျိုးမရွေး ဘာသာ မရွေး က လက်မခံနိုင်သော အကျပ်ကိုင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ သတင်းမှားထုတ်ပြန်ခြင်း၊ သတင်းမှန်ကို ချဲ့ကားဝါဒဖြန့်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော် – နိုင်ငံတော်အလံနှင့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများအား စော်ကားမော်ကားပြုလုပ်ခြင်းများကို ရပ်တန့်ပေးပါရန် လေးနက် တည်ကြည်စွာ မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃၀)ရက်၊ တနင်္လာနေ့။
အခုလို ပြည်တွင်းနေ မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့ အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
“မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ တာဝန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့မှလည်း အသက်ပေး ကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်။”
အခုလို နိုင်ငံသားတို့ကျင့်အပ်တဲ့ နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာစောင့်သိမှု အတွက် လေးစားပါတယ်
ကို nozomi ရေ ။
၃၀ ရက်နေ့ နေ့စွဲနှင့်လည်း ဧရာဝတီ သတင်းမှာ ပါလာပါပြီ ။
” တာလီဘန် ခြိမ်းခြောက်မှု မြန်မာ မွတ်စလင်များ ဆန့်ကျင် ”
ကျော်ခ ၊ July 30, 2012 ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ပါကစ္စတန် နိုင်ငံအခြေစိုက် တာလီဘန် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ Tehreek-e – Taliban (TTP) က
ခြိမ်းခြောက်မှု အပေါ် နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူ အစ္စလမ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့်
နိုင်ငံရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင်များက ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
TTP အဖွဲ့က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် အစ္စလမ်မာဘတ် မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးကို ပိတ်ပစ်၍
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေး ဖြတ်တောက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့မှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း “သွေးနှင့် လက်စားချေမည်” ဖြစ်ကြောင်း
ဇူလိုင် ၂၆ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကို မြန်မာ ပြည်တွင်းနေ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များက
တုံ့ပြန် ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အဲဒီ တာလီဘန်ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက် အုပ်စုတွေကို ကျနော်တို့ လက်မခံဘူး။
သူတို့ကြောင့် သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် ဒီမှာ ဖြစ်မယ့် ကိစ္စတွေကိုလည်း အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။
ဒီမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေ ကလည်း သူတို့နဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်ဘူး” ဟု
မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အစ္စလမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီး၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စိုးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးသည်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အစ္စလမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ဖြင့် စုစည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းရှိ မွတ်စလင် အဖွဲ့များအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချသကဲ့သို့
ထိုသို့ အကြမ်းဖက်လိုသော အဖွဲ့အစည်း များနှင့်လည်း ပတ်သက်မှု မရှိကြောင်း၊
အလားတူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍
စိစစ်မှု မရှိသော အချက်အလက်များနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေခြင်းကိုလည်း
မလိုလားကြောင်း ဦးကျော်စိုးက ပြောသည်။
“ဆန္ဒပြတယ်၊ ဆိုင်းဘုတ်ထောင် တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာက
သူတို့ တောင်းဆိုချက်တွေ မှန်ချင်မှန်မယ်၊ မှားချင်မှားမယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့ မလိုလားဘူး၊
ပြည်တွင်းကိစ္စကို ပြည်တွင်းမှာပဲ ကျနော်တို့ ရှင်းမှာပါ။
လောလောဆယ် တာဝန် အရှိဆုံးက အစိုးရပါ၊
အစိုးရလည်း လုပ်နေပါတယ်” ဟု သူကဆက်ပြောသည်။
အစ္စလမ် ဘာသာဝင် များနှင့် စုဖွဲ့ထားသော
အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (NDPD) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း ကလည်း
“သူတို့ဘာသာ သူတို့ ခြိမ်းခြောက်တာ ကျနော်တို့ကို ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး၊
ကျနော်တို့က စိတ်မဝင်စားဘူး” ဟု ပြောသည်။
ပြည်သူအများ ဒုက္ခသောက ရောက်စေမည့် မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးကိုမှ
၎င်းတို့အနေဖြင့် လက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာ မွတ်စလင် အိုလမာ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ ကတော့ ကိုယ့်ပြည်သူတွေ သောကရောက်မှာကို မလိုလားဘူး” ဟု
မြန်မာ မွတ်စလင် အိုလမာ အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်သည့် ဦးရဲနောင်သိန်း က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့တွင် အကြမ်းဖက်သူများ၏
သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသော မွတ်စလင် ၁၀ ဦး၏ ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပြည်ထဲရေး ဒု ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇံမြင့် အပါအဝင်
အာဏာပိုင်အဖွဲ့များ စုပေါင်း၍ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ခဲ့ခြင်းအပေါ်
အစ္စလမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့များက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းပြီး ဒုတိယမြောက်နေ့တွင် မောင်တောမြို့၌
အစွန်းရောက် မွတ်စလင်များ၏ သွေးဆူ အကြမ်းဖက်ခဲ့မှုကြောင့်
မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊
ထိုပဋိပက္ခ များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အစိုးရက အဓိက ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း
“တဘက်မှာ အစိုးရက ဖော်ထုတ်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ အချိန်မှာ
ကိုယ်က အစွန်းမရောက်တာ ကောင်းတာပေါ့။ အစွန်းမရောက်ဘဲ သွားပြီး မလုပ်ခဲ့ရင်
အဲဒီအဖြေက တော်တော် လှလှပပ ထွက်လာမှာပါ။
အခုတော့ သူတို့က အစွန်းရောက်ပြီး ကလဲ့စားချေတဲ့ ပုံစံ သွားလုပ်တော့ အသတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စ
ဇွန်လပိုင်းကုန်မှာ ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ အဖြေက အခုထိ မသိရှိရဘူး ဖြစ်သွားတယ်” ဟု ဦးရဲနောင်သိမ်းက ဆိုသည်။
ဟိုတစ်ခါ ” စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၆ ) ( ကို သန်းထွဋ်ဦး ရေ ) ”
ဆောင်းပါးပါပြီး ၂ ရက်လောက်အကြာမှာ မြန်မာ မွတ်ဆလင်များဘက်က ၊
ကျောက်နီမော်လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ တွေကို ရှုံ့ချကြောင်း ကြေငြာလိုက်ပါတယ် ။
္ဒ္ဒ္ဒ(စားဝတ်နေရေးအတွက် သင်္ဘောလိုက်နေရင်း ၊ ကံဇတ်ဆရာရဲ့အလိုကျ ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်း ပေါ်မှာ သောင်တင်နေမိပြီး ၊ အမိမြေကို လွမ်းဆွတ်နေရသူပါ ။)လုပ်မနေဘဲနဲ့လေ…
” ဟိုမှာ တိုးလာတဲ့ လူတွေထက် လက်ရှိလူက ပေါက်ဖွားတဲ့ နူန်းက ပိုများပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကွင်းဆင်းပြီးတော့ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ သူတွေက မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဟိုးတုန်းကရှိနေတဲ့ သူတွေက ပေါက်ဖွားမူတွေ သိပ်များတယ် ”
” ပြဿနာအစတုန်းကတော့ လူမျိုးရေး စိတ်ဓာတ် နဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက ရေးပါတယ် ၊
သို့သော်လဲ နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက သူတို့သိလာပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးကို ကျွန်တော်တို့ ထိခိုက်လို့မရဘူး ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ သူတို့ရှိလာပါတယ် ”
” လူမျိုးရေး စိတ်ဓာတ် နဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက ရေးပါတယ် ”
Pro အဆင့်မရောက်သေးပဲ emotion နှင့် သတင်းရေးကြတဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေ ။
သမ္မတကြီးနှင့် အမေစု သာ အမြင်မကျယ်ရင် ၊
လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး စစ်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ် ။
အဘ ကတော့ အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ ၊
ရခိုင်ပြည်နယ်က အရေးပါတဲ့ အာဏာပိုင်ထဲကအသိဆီက ကြားထားပြီးသားမို့လို့ ၊
အခု သမ္မတကြီး ပြောတဲ့အခါ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး ။
လူမကြိုက်မှာသေချာနေပေမယ့် အမှန်ကို ပြောရဲလာတဲ့ ၊
သမ္မတကြီးရဲ့ သတ္တိကိုပဲ အားပေးပါတယ် ။
၁ ။ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ သူတွေက မရှိသလောက် နည်းပါတယ် ။
၂ ။ ပြဿနာအစတုန်းကတော့ လူမျိုးရေး စိတ်ဓာတ် နဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက ရေးပါတယ် ။
ဒါတောင် မပြောသင့်တဲ့ အမှန် တွေ အများကြီး ကျန်နေသေး ။
အမှန်တရားဆိုတာ ကြာကြာ ဖုံးဖိလို့မရပဲ ပေါ်လာမှာပါ ။
အခုတောင် အစိုးရ စကားပြန် လိမ်ပြီး ဘာသာပြန်တဲ့အကြောင်းက ၊
နိုင်ငံတကာမှာ ပွထပြီး ၊ မြန်မာ အစိုးရ အရှက်ကောင်းကောင်း ကွဲနေပြီ ။